सञ्जय र माधुरीको किन टुटेको थियो सम्बन्ध? - Everest Dainik - News from Nepal
सञ्जय र माधुरीको किन टुटेको थियो सम्बन्ध?
बलिउड फिल्म लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ५३ वर्षमा लागेकी छिन् । १५ मे १९६७ मा जन्मिएकी उनी अभिनयमा अब्बलका साथै पढाईमा पनि उत्तिकै तेज थिइन् ।
उनले माइक्रोबायोलोजी विषयमा अध्ययन गरेकी छिन् । फिल्म क्षेत्रमा आउने चाहाना नहुँदा नहुँदै पनि यस क्षेत्रमा आएकी माधुरीलाई १४ पटक फिल्म फेयरमा नोमिनेशन र ६ पटक जित हासिल भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सञ्जय दत्तमाथि अर्को फिल्म बनाउने घोषणा, ‘सञ्जु-द रियल स्टोरी’ माथि परिवारकै आपत्ती
करियरको पीक समयमा उनले डाक्टर नेनेसँग विवाह गरिन् । र, फिल्मबाट पनि टाढा गइन् । तर, उनको विवाहअघि बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तसँग गहिरो प्रेम थियो ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार माधुरी र सञ्जयले विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, सञ्जय दत्त जेल गएपछि उनीहरूको सम्बन्ध टुङ्गिएको थियो । एजेन्सी
ट्याग्स: माधुरी दीक्षित, सञ्जय दत्त